musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Brussels Airlines inopa chitupa chitsva chekuzivikanwa
African Tourism Bhodhi • Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Belgium Kupwanya Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Investments • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Brussels Airlines inopa chitupa chitsva.
Brussels Airlines inoramba yakatarisa kune kondinendi yeAfrica uye inosimbisa chinzvimbo chayo mumusika nechitupa chitsva.
Brussels Airlines yakawedzera nekusimbaradza muna 2020 hurongwa hwayo hwekushandura Reboot Plus, kuitira kuvhurira nzira kune ramangwana-chiratidzo kambani inokwanisa kutarisana nemakwikwi, ine ruzha uye ine hutano mutengo chimiro.
Mushure mekugadzirisazve, kambani yakatanga chikamu chechipiri cheReboot Plus chirongwa: iyo yekuvaka-up uye yekuvandudza chikamu.
Kambani yeBelgian iri kushanduka kuita ine hutano, ine mari yendege inopa maonero kune vatengi vayo, vadyidzani nevashandi.
Nhasi, Brussels Airlines inopa chiziviso chitsva, ichisimbisa chinzvimbo chayo mumusika seBelgium inotakura imba uye nyanzvi yeAfrica ye Lufthansa Boka.
Mavara akagadziridzwa, logo nyowani uye vhezheni yendege chiratidzo chinooneka chechitsauko chitsva chendege, ichitaura kugadzirira kwayo matambudziko emangwana uye kusimbisazve kukosha kwerudzi rweBelgian. Chitsauko chine tarisiro yakasimba pane ruzivo rwevatengi, kuvimbika uye kusimba uku uchichengeta inokwikwidza mutengo-chimiro.
Nekuda kweiyo COVID-19 dambudziko, Brussels Airlines yakakurumidza uye yakawedzera muna 2020 hurongwa hwayo hwekushandura Reboot Plus, kuitira kuvhurira nzira yekambani yeramangwana-chiratidzo inokwanisa kutarisana nemakwikwi, ine ruzha uye ine hutano mutengo chimiro.
Sachigaro we African Tourism Bhodhi (ATB), Cuthbert Ncube, vanotambira danho iri rakatorwa neBrussels Airlines, sezvo richifambirana nedonzvo reATB rekusimudzira Africa senzvimbo imwe chete kuburikidza nekuwedzera nzira dzekufambisa nedzekushanya.
Mushure mekugadzirisazve, kambani yakatanga chikamu chechipiri cheReboot Plus chirongwa: iyo yekuvaka-up uye yekuvandudza chikamu. Brussels Airlines ikozvino yatendeudzira kutarisisa kwayo kune ramangwana nekudyara kwehunyanzvi mune yakavandudzwa ruzivo rwevatengi, matekinoroji matsva, digitization, nzira nyowani dzekushanda, uye kusimudzira kwevashandi vayo.
Kambani yeBelgian iri kushandura kuve ine hutano, ine mari yendege inopa maonero kune vatengi vayo, vadyidzani nevashandi; kambani yendege inogara ichitarisa zvakatipoteredza uye kudzikisira kwetsika yayo yezvakatipoteredza. A New Brussels Airlines.
“Tinoda kunyatso ratidza kutanga kweChitsva Brussels Airlines. Kune vatengi vedu, avo vanokodzera zvakanakisa, asiwo kune vashandi vedu, vakazvipira kune shanduko yatiri kusundira mberi uye yavanopa zuva rega rega. Ndicho chikonzero nhasi tinopa shanduro yekuona kwekutanga kwedu kutsva. Nechiziviso chitsva ichi, takagadzirira kuratidza vatengi vedu, vashandi vedu, vatinoshanda navo nevamwe vese vane chekuita kuti tiri kuvhura peji. Seimwe yendege ina dzeLufthansa Group network, tiri kuvaka nzira yekuenda kune ramangwana rinovimbisa. Isu tinoona chitupa chitsva ichi sechiratidzo chekuvimba nekambani yedu - tichisimbisazve kuzivikanwa kwedu semutakuri wepamba weBelgium. " - Peter Gerber, CEO we Brussels Airlines.